အိမ်ထောင်ကျသွားတဲ့အချိန်ရောက်ရင် သီချင်းတွေကိုလုံးဝမရေးတော့ဘူးလို့ အရွှန်းဖောက်ပြောလာခဲ့တဲ့ Dora Alex - Cele Connections
နိုင်ငံကျော် အဆိုတော် Alex ကတော့ ပရိသတ်ကြီးသိပြီးသားအတိုင်း ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အမြွှာသားနဲ့သမီး နှစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သမီးအကြီး Dora Alex ကတော့ အဖေနဲ့တူပြီး သီချင်းဆို၊ သီချင်းရေး ဝါသနာပါပေမယ့် သားအငယ် Kelvin Alex ကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကို လုံးဝစိတ်မဝင်စားပဲ သာမာန်လူတစ်ယောက်အတိုင်းသာ နေထိုင်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Dora Alex ကတော့ ကျောင်းတစ်ဖက်နဲ့ပဲ သူမရဲ့ ပထမဦးဆုံးအယ်လ်ဘမ် First Things First ကို ထုတ်လုပ်ထားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာ ကျောင်းသွားတက်နေတဲ့ Dora Alex က ကျောင်းတစ်ဖက်နဲ့ အားလပ်ချိန်တွေမှာ သီချင်းလေးတွေ ရေးဖြစ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ Dora Alex က သူမသီချင်းလုံးဝမရေးတော့မယ့် အချိန်တစ်ခုကို “တနေ့ ယူ မယ့် ယောက်ျား တွေ့ ရင်
သီချင်း မရေးတော့ ဘူး 😤 ခုတော့ ရေးရဦးမယ်။ အဲ့ဒါဆို မတွေ့ပါစေနဲ့ လို့ ဆုတောင်းကြမှာ လား? 🥺” ဆိုပြီး သူမရဲ့ ပရိသတ်တွေကို စနောက်လာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Dora Alex ကတော့ သူမရဲ့ First Things First အယ်လ်ဘမ်တစ်ခုလုံးကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ သူမကိုယ်တိုင် ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပြီး လူငယ်ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို ရရှိခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးကလည်း Dora ရဲ့ သီချင်းသစ်တွေကို စောင့်မျှော်နေကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
အိမျထောငျကသြှားတဲ့အခြိနျရောကျရငျ သီခငျြးတှကေိုလုံးဝမရေးတော့ဘူးလို့ အရှနျးဖောကျပွောလာခဲ့တဲ့ Dora Alex
နိုငျငံကြျော အဆိုတျော Alex ကတော့ ပရိသတျကွီးသိပွီးသားအတိုငျး ခဈြစရာကောငျးတဲ့ အမွှာသားနဲ့သမီး နှဈယောကျကို ပိုငျဆိုငျထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ သမီးအကွီး Dora Alex ကတော့ အဖနေဲ့တူပွီး သီခငျြးဆို၊ သီခငျြးရေး ဝါသနာပါပမေယျ့ သားအငယျ Kelvin Alex ကတော့ အနုပညာအလုပျတှကေို လုံးဝစိတျမဝငျစားပဲ သာမာနျလူတဈယောကျအတိုငျးသာ နထေိုငျနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ Dora Alex ကတော့ ကြောငျးတဈဖကျနဲ့ပဲ သူမရဲ့ ပထမဦးဆုံးအယျလျဘမျ First Things First ကို ထုတျလုပျထားခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
လကျရှိမှာတော့ ဆှဈဇာလနျနိုငျငံမှာ ကြောငျးသှားတကျနတေဲ့ Dora Alex က ကြောငျးတဈဖကျနဲ့ အားလပျခြိနျတှမှော သီခငျြးလေးတှေ ရေးဖွဈနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီကနမှေ့ာတော့ Dora Alex က သူမသီခငျြးလုံးဝမရေးတော့မယျ့ အခြိနျတဈခုကို “တနေ့ ယူ မယျ့ ယောကျြား တှေ့ ရငျ
သီခငျြး မရေးတော့ ဘူး 😤 ခုတော့ ရေးရဦးမယျ။ အဲ့ဒါဆို မတှပေ့ါစနေဲ့ လို့ ဆုတောငျးကွမှာ လား? 🥺” ဆိုပွီး သူမရဲ့ ပရိသတျတှကေို စနောကျလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
Dora Alex ကတော့ သူမရဲ့ First Things First အယျလျဘမျတဈခုလုံးကို အင်ျဂလိပျဘာသာနဲ့ သူမကိုယျတိုငျ ရေးသားခဲ့တာဖွဈပွီး လူငယျပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုကို ရရှိခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးကလညျး Dora ရဲ့ သီခငျြးသဈတှကေို စောငျ့မြှျောနကွေမယျ ထငျပါတယျနျော။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ Cele Connections ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။
ဒီဘဝမှာတင် အပြစ်ဝဋ်ကြွေးတွေကျေနိုင်ပြီး အေးချမ်းစေဖို့ တောင်းဆုပြုခဲ့တဲ့ မယ်လိုဒီ